DAAWO:Madaxweyne Uganda oo mar kale ku gafay Somalia – DMS
HomeWararkaDAAWO:Madaxweyne Uganda oo mar kale ku gafay Somalia
DAAWO:Madaxweyne Uganda oo mar kale ku gafay Somalia
9th March 2019 editor
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa mar kale goob fagaare ah kaga dhawaajiyay hadal gaf ku ah magaca Soomaaliya, waxa uuna dalka iyo dadka Soomaaliya usoo qaatay tusaale xun.
Yoweri Museveni ayaa Soomaaliya ku tilmaamay meel aan laga xushmeyn dumarka laguna dhibaateeyo, waxa uuna askarta dalkiisa ee dhibaateeya Dumarka Uganda iyo kuwa aan anshaxa laheyn ugu baaqay in ay codsi soo qortaan si Soomaaliya loogu diro.
Madaxweynaha Uganda ayaa si weyn uga carooday askari Ugaandhees ah oo dharbaaxay haweeney u dhalatay dalkaasi, waxa uuna shaaciyay in sharci daro tahay in haweenka gacan loo qaado ama dhibaato la gaarsiiyo.
Waxa uu ugu baaqay Museveni askarta aanan dooneyn ku dhaqanka sharciga inay codsi soo qoraan si Soomaaliya loo geeyo, isaga oo tusaalaha u soo qaatay in Soomaaliya uusan ka jirin ku dhaqan sharci in iyo la xaq dhowro dumarka.
“Askari in uu dumar dharbaaxo ama ku qayliyo qof reer Uganda ah waa wax aan laga aqbali karin, waana gaf weyn oo Bulshadda ceeb ku ah askarta aan la hayn asluubta wanaagsan oo aan bulshadda la dhaqmi karin, waxaan u diraynaa Soomaaliya oo ah meesha dhaqan xumadda sidan oo kale ah looga baahan yahay, hadii aad caraysan tahay waxaad i weydiisan kartaa dal ku galka Soomaaliya maxaa yeelay halkaasi ayaa looga baahan yahay gardarada.” Ayuu yiri madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni.
RW Khayre oo baajiyey safar uu ku tagi lahaa Kismaayo
SAWIRO:Ciidamada Puntland oo gacanta ku dhigay Doonyo sharci daro ah